China AY Series Centrifugal Mmanụ nfuli ndị na-emepụta na ndị na-eweta ya | KAIQUAN
Industrylọ ọrụ Petrochemical
AY usoro centrifugal nfuli na-haziri na kachasị dabere na ochie Y ụdị nfuli. Ọ bụ ụdị ngwaahịa ọhụrụ iji zute arịrịọ nke oge a. Ọ nwere arụmọrụ dị elu na Ọ bụ mgbapụta nchekwa ume.
AY usoro centrifugal nfuli na-haziri na kachasị dabere na ochie Y ụdị nfuli. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ngwaahịa iji zute arịrịọ nke oge a. Ọ nwere arụmọrụ dị elu na Ọ bụ mgbapụta nchekwa ume. Na ọnọdụ nke anaghị emetụta ngwaahịa mgbanwe, anyị na-ebuli ụfọdụ na-enweghị ezi uche mmiri na-eme ka ọ ka mma.
1. Maka iburu ahụ, anyị na-edochi 35,50,60 na-ebu ozu nke ụdị Y ụdị ochie na 45,55,70 na-ebu ahụ nke nwere ntụkwasị obi dị elu.
2. Jiri ụdị hydraulic dị elu na-arụ ọrụ nke ọma maka akụkụ hydraulic na-agafe akụkụ na ụdị ndị ugbu a nwere 5 ~ 8% arụmọrụ dị elu karịa ụdị ochie.
3. AY ụdị mmanụ nfuli Ọdịdị ụdị, echichi akụkụ, arụmọrụ mkpuchi, ihe na klas agbanweghi. Ọ na-adaba adaba imelite nfuli ochie.
4. A na-eji ihe ndị dị elu eme ihe maka ọtụtụ usoro ngwaahịa.
5. A na-eji ihe eji eme ihe. Ma ọ bụ tumadi klas2 ~ 3 ihe. Anyị na-abawanye ụdị abụọ nke ihe eji eme ihe, ihe nkedo na nkedo, maka ihe ndi di ka iburu aru ka mgbaputa wee buru ihe kwesịrị ekwesị maka mpaghara oyi ma ọ bụ ọnọdụ ọrụ dịka n’èzí, mmiri na ihe ndị ọzọ.
6. E nwere ụdị ụdị agba atọ dị iche iche, ikuku ikuku oyi, ikuku ikuku ikuku na mmiri jụrụ. Ọnọdụ ọrụ dị iche iche dịka ọnọdụ ọrụ dị iche iche. Igwe ikuku coolingdị jụrụ dị mma karịsịa maka mpaghara nke enweghị mmiri dị ọcha.
7. AY ụdị nfuli nwere mma mma mgbe emelite na optimizing ụfọdụ mmiri dị ka ndị ahịa echiche.
Enwere ụdị nfuli mmanụ AY iri 27 yana mkpuchi arụmọrụ:
Ike: Q = 2.5-600m3 / h
Isi: H = 20-670m
Ọnọdụ ọrụ: t = -45 ~ = 420 (mgbapụta multistage -20 ~ = 200)
Ọnọdụ ọrụ (t): -20 ~ + 420
AY usoro mgbapụta na-eji maka mmanụ ala mmezi, petrochemical ụlọ ọrụ, chemical ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ngwa iji nyefee mmanụ ala na-enweghị ihe siri ike, LQG na usoro ndị ọzọ. Ọ ka mma iji nyefee ọkụ, ihe mgbawa ma ọ bụ oke mmiri na-egbu egbu na mmiri ọkụ.
Nke gara aga: KGD / KGDS Series Vetikal Pipe mgbapụta
Osote: KD / KTD Series Multistage Centrifugal mgbapụta
Multistage Centrifugal mgbapụta
Multistage Ugboro abụọ mmiri Centrifugal mgbapụta
Igwe anaghị agba nchara Multistage Centrifugal mgbapụta
Vetikal Inline Multistage Centrifugal Pump
Vetikal Multistage Centrifugal mgbapụta
KD / KTD Series Multistage Centrifugal mgbapụta
KGD / KGDS Series Vetikal Pipe mgbapụta
KCZ Series Chemical Industry Usoro mgbapụta
KZ Series Petrochemical Usoro mgbapụta Ngosi
KDA Series Petrochemical Usoro mgbapụta
KQA Series Multistage mgbapụta na Axial wụpụrụ Casing